SAWIRRO:- Guddiga doorashadda Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Oo Lagu Dhawaaqay. – Idil News
SAWIRRO:- Guddiga doorashadda Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Oo Lagu Dhawaaqay.
DHUUSA-MAREEB(IDIL NEWS)-Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Galmudug ayaa maanta Kulan ku yeeshay Magaalada Dhuusamareeb, waxaana looga dooday Mooshinka laga keenay Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug.
Maalinta Berri ah ayaa lagu wadaa in Magaalada Dhuusamareeb lagaga dhawaaqo Codka kalsoonida kala noqoshadda Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug.
Gudoomiye ku xigeenka Koowaad Baarlamaanka maamulka Galmudug Xareed Cali Xareed ayaa sidoo kale ku dhawaaqay Guddiga doorashadda Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug, Maadaama xilkii horay looga qaaday Gudoomiyihii Baarlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casir.
Guddiggaan ayaa ka kooban 11 xubnood, waxaana ay ka shaqeyn doonaan doorashadda Gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug.